Black Hat SEO Maitiro Anofanira Kudziviswa Maererano neSemalt
Nzvimbo yepamusoro injini yekutsvaga yakatarwa kazhinji inoreva hutano hwakanaka hunoenda kune webhusaiti yako. Ichi ndicho chikonzero mabhizimisi mazhinji anotengesa zvikuru mukutsvaga kwekutsvaga. Sezvo hondo yepamusoro yepamusoro mune zvinotsvaga mitsva yekutsvaga ichiwedzera, vamwe vakashandisa Black Hat SEO tactics.
Google yakawana matanho akawanda anonyengedza ayo vatengesi vanopinda kuti vasimudzire kutsvakurudza. Yakavandudza maitiro ayo ekutsvaga matanho aya uye kuvhara zvivi kuburikidza nekuderedza kutsvaga kwekutsvaga injini kana kuvadzinga.
Kurasikirwa nekuonekwa paGoogle kunoreva nzira shoma, iyo inotungamirira kuderedza kutendeuka nekuderera kwebhizimisi rako. Vatengesi uye magetsi ekutengeserana masangano avo vasingazivi mitemo yeGoogle vanowanzoita izvi zvitadzo zvinotungamirira kuowedzera kutsvaga injini rankings.
Jack Miller, we Semalt Mutungamiriri Mukuru weVatengi vanobudirira, anokukurudzira kuti usapinda maitiro matsva anotevera SEO maitiro:
Mamwe mapurogiramu anonyora zvakare nyaya dzinoshandiswa nemashandisiro uye izwi rakasiyana; izvi zvinotenderera. Aya mapurogiramu anoshandisa mbambo yekupa mazita okufananidza nemamwe mazwi mamwe kuitira kuti zvikamu zvionekwe zvakasiyana.
Google yakawana nzira yekutsvaga zvinyorwa zvakatsvaga. Kune ziso risina kudzidziswa, nyaya idzi dzinogona kuonekwa sedzakasiyana, asi dzinowanzova dzisiri dzevanhu vanoverenga..Chenjererai vatengesi vekutsvaga vanofunga kuti vanogona kusimudza injini yako yekutsvaga zvishoma uye vanobudisa nyaya dzakawanda. Vamwe vavo vanoshandisa nhepfenyuro.
Google yakashandiswa kuisa mapeji akaenzana nhamba yezvinyorwa zvemashoko akawanikwa ikoko. Nenguva isipi vatengesi vakanga vachikanda mazwi ose pamusoro pezvakagadzirwa nekunyorera zvishoma vaverengi. Saka Google yakarongedza maitiro ayo ekufunga nezvezvimwe zvinhu zvakadai sekuverengwa kwevanhu uye nezvekukosha kwehuwandu hwehuwandu.
Nhasi, shoko guru rinobva pakati pe5 kusvika ku10% rinogona kuita kuti Google inyore zvinyorwa zvako nechezasi kutsvaga rankings. Mashoko aya anogona kuwedzera rankings, asi Google inotsvaga kunzwisisa zvakawanda pamusoro peiyo peji kana zvayo zviri pamusoro apa kuitira kuti mazwi ekufanirwa ave akakodzera mune zvatinoda.
Mukuda kwekuwana backlinks, vamwe vatengesi vanosarudza kupa maonero pamusoro pemasimba mablog uye mawebsite. Sezvo kushamwaridzana kunobatsira pakutsvaga kwekutsvaga kwewebsite yako, izvi zvinoratidzika seurongwa hukuru. Zvisungo kubva kune mawebsite ane magwaro nemabloggi ane hutoro hwakawanda pakuvandudza kutsvaga nzvimbo.
Imwe nzira inotsvaga injini yekutsvaga vatengesi inoziva kuisa mazano nehukama kune mamwe mawebsite mune zvinyorwa zvemashoko. Nzvimbo iyo uri kutaurira inogona kuona chibvumirano uye inorondedzera se spam kuGoogle. Izvi zvakaipa nokuda kwezvikwata.
Izvi ndezvipi kana zvigadzirwa zvichinyorwa. Tsvakurudzo dzejini dzinotsvaga dzichaona kuti zvinyorwa zviri pamusoro pehurukuro senyeredzi. Apo vashandisi vachitsvaga kuongorora nyeredzi, vanowana zvinyorwa pakati pemigumisiro yekuongorora nyeredzi chete kuti vaone kuti zviri kugutsikana nezvemafirimu ezuva reS star Wars.
Vatengesi veShady vanoita izvi kuburikidza nekupa injini dzekutsvaga michina zvakasiyana siyana kubva kuvanhu vanoverenga. Izvi zvinotora zvikwereti zvakakura kubva kune injini yekutsvaga kana yakawanikwa.
Nyasha dzechikara SEO maitiro anobudirira nokuti anopa chimwe chinhu chekutsvaga kunzvimbo yepamusoro yekutsvaga injini, asi ivo vari kuwedzera uye havakwanise kuedza. Shandisa tsati tsvuku SEO maitiro, anoda mimwe nguva uye nguva, asi michero yakanaka kwazvo kutsvaga rankings kuderedza kutyisidzira kwezvikwereti Source .